UKUZISA IIBATES 'ZECARLIN BATES, IINKWENKWEZI EZINGAKUMBI EZIVAVANYE UKUPHUMELELA KWI-COVID-19 - IINDABA
Ukuzisa iiBates 'zeCarlin Bates, iiNkwenkwezi ezingakumbi ezivavanye ukuPhumelela kwi-COVID-19
I-coronavirus yenoveli iye yenza ujikelezo lwayo kwihlabathi liphela emva kokuphakama kokuqala ngaphakathi kweWuhan, Hubei, kwiphondo lase China kwakhona kwi-2019 - kwaye njengoko sithetha ezona nkwenkwezi zinkulu akufuneki zikhusele.
UTom Hanks kwaye URita Wilson ubephakathi kwamagama amaninzi okuqala aphezulu ukujonga eyakhayo kwi-COVID-19. Ngomhla we-11 ku-Matshi ophumelele imbasa yeAkhademi wabelana ngemiqondiso yokuba isibini esinezakhono ngalo lonke ixesha labo e-Australia, indawo uHanks wayezibandakanye nayo kwimveliso yangaphambi kwexesha UBaz Luhrmann NguElvis Presley biopic.
Saziva sityhafisiwe, ngokungathi sinomkhuhlane, kunye neempawu zomzimba ezimbalwa, i umhlali washlathini Umdlali weqonga okhankanywe ngaye kunye noWilson. URita wayenemikhuhlane efika apha kwaye yahamba.
Ngo-Matshi 16, Ngeveki uqinisekisile ukuba uHanks kunye noWilson bebesungulwe esibhedlele. Esi sibini, sitshatile iminyaka engama-30, siqeshe indlu e-Australia ngaphambi kokuba siphinde sibuyele e-U.S.
Phantse veki nganye emva kokuqinisekiswa kukaHanks noWilson, Idris Elba | wazisa ukuba wosuleleka ngempumelelo. Utyhile ngendlela yeTwitter ngoMvulo ukuba uzimisele ukuvavanywa emva kokufunda ukuba umntu abandakanyekayo kuvavanywa ngokwakhayo nge-13 ka-Matshi.
Ngosuku olulandelayo emva kokuthetha, umdlali weNgesi wabelana ngesivumo sikaHanks samchukumisa ukuba axoxe ngemeko yakhe yobuqu. Ndonwabe kakhulu nguTom Hanks, onokuba ngumntu ophakathi kwamehlo kawonke-wonke ophume apha kwaye wakhankanya ukuba bayifumene kwaye bebesaziwa esidlangalaleni ngayo, Amakati Umlingisi okhankanywe kwividiyo ye-Twitter ehamba phambili. Bendihlala ndikhuthazeka ngokwenene kukudluliselwa kukaTom apho.
Skrolela ezantsi ukubona bonke abantu abadumileyo abaye bavavanya eyakhayo yenoveli coronavirus.
Izigaba: Inetflix Hulu Iindaba
Iintliziyo ze-bob iintliziyo ze-abishola zexesha lokugqibela
I-tracy maltas inexabiso elifanelekileyo
ngu-bob morley gay
umdala kangakanani matt altman
Isiqendu sesithsaba 6
kwenzeka ntoni ekupheleni kwe-movie yeseli